Ao anatin’ny fanamarihana ny faha-20 taona nidirany teo amin’ny sehatry ny mozika. Fiaraha-miasan’i Joëlle Claude tamin’ny mpanakanto maromaro no hita ao anatin’ny «I’ll sing for you» na «Hihira ho anao», rakikirany voalohany.
Nampahafantarina, omaly, tetsy amin’ny Kudeta Anosy ny fahaterahan’io vokatra io ka ahitana ny fandraisana anjaran’ ireo mpanakanto nanara-maso azy hatrany am-boalohany toa an-dry Silo, Datita Rabeson, Joël Rabesolo, Sammy Andriamanoro…
Ankoatra ireo mozika jazz efa fantatra, dia maromaro ihany koa ireo hira malagasy hokaloiny ao anatin’io rakikira io amin’ny endrika hafa tsy toy ny mahazatra. Ao anatin’ireny ny kalon’ny fahiny toy ny «Adiady», «Vorom-potsy», «Famindra tanora»… Miavaka ihany koa ny hiangalian’i Joelle Claude ny «Miala tsiny», izay hira nahafantarana an’i Tiana.
Ho fampahafantarana io rakikira io dia hisy ny fampisehoana maimaim-poana hotanterahina etsy amin’ny CGM Analakely, ny zoma ho avy izao, ka hitondrany an-tsehatra miaraka amin’ ireo mpanakanto nanampy azy an’ireo hira voarakitra amin’io vokatra io. «Joel Rabesolo ihany no tsy ho avy noho izy tsy eto an-toerana», araka ny fanamarihan’i Joelle Claude.